Uwadibanisa njani amanqaku akho namaphepha eendaba afana neMeneame, Enchilame, Fresqui, Technorati, njl. Iindaba zeGajethi
HNgeli xesha bendifuna ukunika iindwendwe zebhlog ukuba zithumele amanqaku apapashiweyo apha kumaphepha aphambili eendaba, kodwa ukufezekisa oku kuye kwafuneka ndinike ii-laps ezingaphezulu kunokuba ziyimfuneko. Ingxaki yayikukuba uninzi lweebhlog (uninzi, ayizizo zonke) zenziwe nomphathi womxholo onje I-WordPrees okanye efanayo kwaye ukuba ufuna ukongeza amakhonkco kwiiwebhusayithi zeendaba ke dibanisa Faka iplagi kwaye uhambe kakuhle kakhulu. Kodwa le bhlog icwangcisiwe kwasekuqaleni kwaye oko kuthetha ukuba umsebenzi ngamnye omtsha endifuna ukuwongeza uquka ukukhangela okutsha kukhangela ulwazi malunga nalo.
MNdizimisele ukukwazi ukudibanisa amanqaku kunye namaphepha anje meneame kunye neFresqui, ke ndakhangela iintsuku ezimbalwa Uphando ulwazi ngendlela yokwenza kwaye ndisebenzise amabinzana afana nala:
Ungazithumela njani iindaba kuMeneame?
Ungawathumela njani amanqaku kuFresqui?
Unxibelelana njani namaphepha eendaba?
Ndilwenza njani unxibelelwano olusuka kwibhlog yam ukuya kwiinethiwekhi zentlalo?
njl njl njl njl njl
TEmva kophando oluninzi, ndafumana kuphela ulwazi oluyinxalenye kwaye ikakhulu ijolise kubaphathi bomxholo abadumileyo. Ukubona ukuba andazi ukuba ndingalifumana njani ibinzana elifanelekileyo elinokundisa kwiphepha elichaza ukuba lenziwa njani, ndaye ndagqiba kwelokuba ndijonge amaphepha endizama ukudibanisa nawo. Emva kokukhangela ixesha elide andifumananga nto inokundinceda (iya kuba yeyokungazithembi, ukuba umntu uyayazi apho athetha khona ngayo, uyihlomle), ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyenze kabukhali.
LOkanye kuqala bendikhangela iphepha apho ndifumene khona imifanekiso "Yabelana ngalo" kwaye ndiyikhumbule Xybernetics Inenye yezo icon ziluhlaza ezibandakanya isiqhagamshelo. Kanye le bendiyikhangela ke ndindwendwele iphepha, ndacofa i icon kwaye ndaqala ukufunda ii-urls ezazinekhonkco ngalinye. Emva kokubhala amanqaku okwethutyana, ndabona ukuba onke amakhonkco ayenesakhiwo esifanayo. Ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze uvavanyo kwaye ndabona ukuba iyasebenza ke ndiye ndaqala ukusebenza ukwenza ezam amakhonkco.
EOlu lolwakhiwo olusisiseko sekhonkco zokupapasha iindaba:
umsebenzisi (umzekelo ? url =)
umsebenzisi (umzekelo & isihloko =)
Aixesha ngokuxhomekeke kwiphepha ngalinye leendaba kuya kufuneka ubeke i-URL ehambelanayo kwaye kwezinye awuyi kufuneka ukongeza isihloko okanye inkcazo. Masibone imizekelo:
Thumela iindaba kuMeneame
LLe URL ilandelayo iya kuthumela inqaku le- ZapaJoker a meneame , uyiqwalasele kwaye uyihlalutye:
Ukuthumela iindaba kuMeneame kwibhlog yakho kufuneka uqale ubeke i-url efumana iindaba eMeneame, ukuba sijonga ikhonkco esibona ukuba:
Emva koko umsebenzisi okhethekileyo osebenzisa elo phepha wongezwa, ukufumanisa ukuba yintoni, sijonga ikhonkco elingaphezulu kwaye siyabona ukuba yile:
Okokugqibela yongeza i-URL yenqaku lakho, leyo ufuna ukuba ipapashwe eMeneame:
amanqaku / i-zapajoker-ividiyo-engqina-konke »»
Kwaye ikhonkco eliza kwalatha kwiphepha lokupapashwa kweendaba laseMeneame sele igqityiwe, kufuneka unxibelelanise ikhonkco kunye nomqondiso omeleyo.
Thumela iindaba kwiFresqui
ENgeli xesha siza kubona kuphela umahluko kuthumelo oluya eMeneame. Jonga le URL ilandelayo eya kuthunyelwa ngenqaku leZapaJoker kodwa ngeli xesha kuFresqui:
amanqaku / i-zapajoker-ividiyo-ebonisa-yonke.php& isihloko =Zapa
FQaphela ukuba iyafana nekhonkco langaphambili elinomahluko okwexeshana kuba esiphelweni setyathanga umqhubi oza kuba nesihloko senqaku elingenisiweyo ukongezwa. Kule meko umqhubi ngu:
"& Isihloko ="
Lo mqhubi ujoyine isihloko senqaku, kule meko kulandelayo:
Y kuko konke. Kuxhomekeka kwiphepha ofuna ukuthumela kulo iindaba, kuyakufuneka usebenzise isisebenzisi esinye okanye ezingaphezulu, kwaye ugcine engqondweni ukuba ezi zinokwahluka kwezo kuxoxwe ngazo apha, umzekelo kuMnumzana Wong lo msebenzisi usetyenziselwa ukuqulatha i-URL inqaku lakho "Yongeza =urlurl & bm_url =", ke kuyakufuneka ujonge kuphela indlela i-portal yeendaba edityaniswe ngayo kwiphepha owaziyo ukuba ngabaphi abasebenzisi abasebenzisa le portal.
BEwe, ndiyathemba ukuba kwabo banako ukufumana eli nqaku kwaye bakwimeko efanayo nale bendinayo, le mini mini yokufundisa ukuba ungadibanisa njani amanqaku akho kumaphepha eendaba aya kuba luncedo. Kude kube kuncinci kakhulu. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uwadibanisa njani amanqaku akho namaphepha eendaba anje ngeMeneame, Enchilame, Fresqui, Technorati, njl.
Andizange ndiqonde nantoni na.
Ngaba akukho ndlela elula yokubloga?
aponcho ... ngokucacileyo konke oku kuthetha "ukubeka izandla zakho" kwi-CMS.
Hola aponcho njengoko isitsho Yinja ukuze eli nqaku libe luncedo kufuneka ube nakho ukuguqula umphathi womxholo wakho. Andazi ukuba iBlogger ivumela kangakanani ukuguqula ikhowudi yemithombo yamaphepha ebhlog yakho, ukuba akunakwenzeka kuya kufuneka ulinde iBlogger ukuba iphumeze olu khetho, ukuba ayikenzi njalo.
Ngayiphi na imeko, eyona nto iphambili kweli nqaku kukubona ukuba amakhonkco afihliweyo emva kwemifanekiso emincinci akhiwe njani, ukuba uyafuna kwaye unokufumana izandla kwikhowudi yebhlog yakho, ungathandabuzi ukubuza into ongayenziyo qonda. Ukubulisa.
Ndiyavuyisana nawe ngenqaku, yeyona nto ibalaseleyo kwi-intanethi malunga noku.
Ndinombuzo, akukho ndlela yokwenza oku, kube kanye kuzo zonke iiposti, kwaye hayi nganye nganye?
Enkosi ngengcaciso yakho Toni. Into echazwe kwinqaku sisiseko solu hlobo lweekhonkco, ngoku ukuba uyazi ukuba isebenza njani, into ekufuneka uyenzile kukwenza ikhowudi eyenzela wena. Ndiyiphumeze nge-php encinci kwaye ikhowudi yenziwa ngokuzenzekelayo kwisithuba ngasinye. Ukubulisa.
Ndiyaqaphela uToni, ndiza kuphanda kancinci, ndicinga ukuba ndingafumana into yokukunceda.
Ingxaki kukuba iibhloko zam zikwiiblogi kwaye andazi ukuba kunokwenzeka ukuyenza (ukuba kunjalo, yenziwa njani? = Isihloko esihle seposti yakho)
ULuis Samanamud sitsho
Ugh, ndinesiyezi, ndifike apha ngesizathu esinye, ndifuna isihlanganisi senethiwekhi ngeSpanish, sele ndinayo enye ye-adthis.com kodwa ayicingi nge-meneme okanye i-fresqui, zimbi ezinye.
Ikhowudi icace gca, kufuneka ubenobuganga, ukuba awazi, njengam, kodwa yintoni engacacanga kum ukuba yeyiphi na le khowudi kuyo nayiphi na ikhonkco, okanye kuya kufuneka ubeke ikhonkco ngekhonkco, ndifuna nje Ukucofa njengakwi addthis.com.
Phendula uLuis Samanamud
Umntu onento elula ukuyiqonda, akukho buxoki, inkcazo ibintle kakhulu, enkosi.
Ngapha koko, ngokuqinisekileyo ikhona indlela yokuba ikhowudi osibonise yona ibandakanya i-url ngamandla, Oko kukuthi, isebenza kuyo yonke indawo yethu.
gabriel ortiz sitsho
Ukuba ndiqonde ngokugqibeleleyo, enkosi ngolwazi.
Phendula i-gabriel ortiz